DIB U DHACA DOORASHADA
Home /DIB U DHACA DOORASHADA
Date: Sunday, 1st January, 2017
Maanta oo aay taariikhdu tahay 1da janaayo waxaan shir jaraa'id ku qabtay Muqdisho, waxaan uga hadlay qodobada soo socdo.
1. Madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday wuxuu 4 sano kahor ballan qaaday inuu dalka gaarsiiyo doorasho qof iyo cod ah. Nasiib darro doorashadaasi ma dhicin, waxaana la sheegay in mid dadban la qabanayo sanadkii dhamaaday ee 2016. Taas lafteedu waxay noqotay mid lagu fashilmay oo ilaa 5 jeer ayaa doorashada dib loo dhigay. Runtii taas masuuliyaddeeda hoggaanka sare ayaa qadayo sababtoo ah ayaga ayaa ballanta galay oo ay ahayd in ay fuliyaan.
2. Waxaan u hambalyeynayaa Barlamaanka cusub oo shalay yeeshay kalfadhigii ugu horreeyay. Kulankii koowaad ee ay yeesheen waxa uu ahaa mid ka turjumayo in ay yihiin xildhibaanno ilaalinaya danta dalka iyo dadka. Iyada oo aan miisaaniyaddii hore la iskala xisaabtamin in mid kale la keeno ma aha wax la sugayay. Waxay ahayd in isla xisaabtan laga galo mushaaraadkii shaqaalaha iyo ciidanka oo aan 8 bilood waxba la siinin. Runtii taasi waxay muujineysaa in ay xildhibaannadu doonayaan isbadal oo aan sidii afartii sano hawsha lagu soo waday inaan lagu sii socon karin.
3. Waxaan kale oo ugu hambalyeynayaa in ay laaleen guddiyadii doorashooyinka dadban maamulayay waayo xildhibaannada Soomaaliyeed ayaa ku filan in ay si hufan u qabtaan doorashada Madaxweynaha. Waxaan aaminsanahay in ay yihiin kuwii isbadal muuqda dalka u horseedi lahaa.
4. Afartii sano ee lasoo dhaafay waxaa si xaqdarro ah loo dilay 19 xildhibaan. Waxaan aaminsanahay in la dayacay xildhibinnadaas oo haddii ay dowladdu siin lahayd amni ku filan in aysan dhacdeen.
Mar ay saxaafaddu i waydiisay waxaan kaga duwanyahay musharrixiinta kale ee xilkan igula tartamaya ayaa waxaan idhi “Waxaan uga duwanahay waa inaan doonayo inaan isku xiro shacabka Soomaaliyeed iyo dowladooda. Shacabka markii ay dowladdu ka jeesato iyagana way ka jeesanayaan. Aniga waxaan horseedayaa inaan shacabka usoo celiyo dowladnimadooda oo ay ku yeeshaan talooyin, lagana jawaabo dareenkooda. Markaas ayay ka qeyb qaadan karaan sugidda amniga iyo bixinta canshuuraha si adeegyo loogu qabto.”
Sidoo kale Maraay saxaafadu i waydiisay inaan xiriir wanaagsan la lahayn beesha Caalamka, talada dalkana ay ka go’do dalal shisheeye ah ayaan ku jawaabay “Dalkan waxaa iska leh dadka Soomaaliyeed, masuuliyaddiisana waxaa qaadaya dadka la doorto, xildhibaannada wax dooranayana waxay matalaan shacabka. Beesha caalamku waxay kaliya ee ay dooneyso waa in ay Soomaali dhisato dowlad nadiif ah oo aan musuqmaasuq ku shaqeynin. Caalamku waxay rabaan shacab iyo dowlad aan lagu kala dhex jirin. Sababta naloogu dhexjiro waxa ay tahay inuusan jirin xiriir adag oo dowladda iyo shacabka ka dhaxeeya. Haddii la I doortana waxaa la igu yaqaanaa inaan ahay masuul dhisi kara dowlad si dhab ah u matasha shacabka.”
Ugu dambeyntii waxaan ugu hambalyeenayaa shacabka Soomaaliyeed sanadka cusub waxaana u rajeeyay in sanadkan 2017 uu noqdo mid ay dadka Soomaaliyeed ku noolaadaan nabad iyo barwaaqo.